Magnesium Silicide, Mg2Si - Goodao Technology Co., Ltd.
Mg2Si waa xarunta kaliya ee xasilloon ee nidaamka bin Mg Si. Waxay leedahay astaamaha barta dhalaalaysa sare, adkaanta sare iyo modulus laastik sare. Waa farqiga cidhiidhiga n n nooca semiconductor. Waxay leedahay rajo codsi oo muhiim ah aaladaha optoelectronic, aaladaha elektarooniga ah, aaladaha tamarta, laser, wax soosaarka semiconductor, isgaarsiinta heerkulka joogtada ah iyo meelaha kale
>> Tilmaanta Cabbirka
Magaca Shiinaha magnesium silicide
Magaca Ingiriisiga: magnesium silicon
Waxaa sidoo kale loo yaqaanaa aasaaska biraha
Caanaha kiimikada mg Ψ Si
Miisaanka molikalku waa 76.71 CAS
Lambarka aqbalitaanka 22831-39-6
Barta dhalaalida 1102 ℃
Laysku milmi karo biyaha kana cufan biyaha
Cufnaanta: 1.94g / cm
Codsiga: Mg2Si waa xarunta kaliya ee xasilloon ee nidaamka bin Mg Si. Waxay leedahay astaamaha barta dhalaalaysa sare, adkaanta sare iyo modulus laastik sare. Waa farqiga cidhiidhiga n n nooca semiconductor. Waxay leedahay rajo codsi oo muhiim ah aaladaha optoelectronic, aaladaha elektarooniga ah, aaladaha tamarta, laser, wax soosaarka semiconductor, isgaarsiinta xakameynta heerkulka joogtada ah iyo dhinacyada kale.
Magnesium silicide (Mg2Si) waa semiconductor aan toos ahayn oo leh farqiga u dhexeeya kooxda. Waqtigaan la joogo, warshadaha microelectronics waxay inta badan ku saleysan yihiin qalabka Si. Nidaamka sii kordhaya Mg2Si filim khafiif ah ee 'Si substrate' wuxuu la jaan qaadayaa nidaamka Si. Sidaa darteed, qaab dhismeedka Mg2Si / Si Heterojunction wuxuu leeyahay qiime cilmi baaris weyn. Warqaddan, filimada khafiifka ah ee loo yaqaan 'Mg2Si jawiga u habboon' ee deegaanka ayaa lagu diyaariyey qalabka 'Si substrate' iyo 'insulin substrate' by magnetron sputtering. Saamaynta buufinta mg dhumucda filimka tayada filimada khafiifka ah ee 'Mg2Si' ayaa la darsay. Saldhiggan, tikniyoolajiyadda diyaarinta ee aaladaha kala duwan ee loo yaqaan 'Mg2Si based heterojunction LED' ayaa la darsay, iyo guryaha korantada iyo indhaha ee filimyada khafiifka ah ee Mg2Si ayaa la darsay. Marka hore, filimada Mg waxaa lagu shubay Si substrates by magnetron sputtering heerkulka qolka, Si filimada iyo filimada Mg waxaa lagu shubay on muraayadaha muraayadaha, ka dibna Mg2Si filimada waxaa lagu diyaariyey daaweynta kuleylka ee vacuum hoose (10-1pa-10-2pa). Natiijooyinka XRD iyo SEM waxay muujinayaan in wajiga kaliya ee Mg2Si filim khafiif ah lagu diyaariyey ku xirida 400 ℃ 4h, filimka khafiifka ah ee 'Mg2Si' ee la diyaariyeyna wuxuu leeyahay miro cufan, labis iyo isdaba joog ah, dusha sare iyo kristantal wanaagsan Marka labaad, saamaynta dhumucda filimka Mg ee koritaanka Mg2Si semiconductor filimka iyo xiriirka ka dhexeeya dhumucda filimka Mg iyo dhumucda filimka Mg2Si ka dib markii la lifaaqay ayaa la darsay. Natiijooyinka waxay muujinayaan in marka dhumucda filimka Mg ay tahay 2.52 μ m iyo 2.72 μ m, waxay muujineysaa fiicnaan wanaagsan iyo fidsan. Dhumucda filimka Mg2Si wuxuu ku sii kordhayaa kororka dhumucda Mg, taasoo qiyaastii ah 0.9-1.1 jeer tan Mg. Daraasadani waxay door muhiim ah ka ciyaari doontaa hagida qaabeynta aaladaha ku saleysan filimada khafiifka ah ee 'Mg2Si'. Ugu dambeyntiina, been-abuurka aaladaha iftiiminta hiitrojunction ee Mg2Si ayaa la darsay. Qalabka Mg2Si / Si iyo Si / Mg2Si / Si Heterojunction LED ayaa lagu farsameeyay Si substrate-ka.
Qalabka korantada iyo indhaha ee Mg2Si / Si iyo Si / Mg2Si / Si heterostructures waxaa lagu baranayaa iyadoo la adeegsanayo afar nidaam oo probetest ah, falanqeeye dabeecadeed oo semiconductor iyo spectrometer joogto ah / ku-meelgaar ah. Natiijooyinka waxay muujinayaan in: adkeysiga iyo xaashida caleenta filimada khafiifka ah ee 'Mg2Si' ay yareyso kordhinta dhumucda Mg2Si; Mg2Si / Si iyo Si / Mg2Si / Si heterostructures waxay muujinayaan astaamo hagitaan aan toos ahayn oo hagaagsan, iyo korantada qaab dhismeedka heterostructure ee Si / Mg2Si / Si oo qiyaas ahaan gaaraya 3 V; xoojinta photoluminescence ee qalabka Mg2Si / n-Si heterojunction waa midka ugu sarreeya marka dhererka dhererkiisu yahay 1346 nm. Marka dhererka dhererkiisu yahay 1346 nm, awoodda photoluminescence ee Mg2Si filimada khafiifka ah ee lagu diyaariyo maadooyinka dahaarka leh ayaa ugu sarreeya; marka la barbardhigo fotoluminescence-ka Mg2Si filimada khafiifka ah ee lagu diyaariyey substrates kala duwan, filimada Mg2Si oo lagu diyaariyey quartz substrate-saafi ah ayaa leh waxqabad iftiin fiican iyo astaamo infrared monochromatic luminescence.
Hore: is-dilidda vanadium, VSi2
Xiga: Dilaaga Chromium, CrSi2
Daawaha loo yaqaan 'Magnesium silicide alloy'
Budada magnesium silicide
saafi ah Magnesium silicide
saafi ah Magnesium warshadaha is dila
saafiya Magnesium silicide Factory
saaraha Magnesium silicide-saaraha
saafi ah Soosaarayaasha silsilada Magnesium
saafi ah Magnesium silicide Price
xigashooyin Magnesium silicide Quotes